စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: 2007
မုသားမပါ ၂၀၀၈ မှစ၍...
ထပ်ဖို့ရေး ထက် လူဖြစ်ခတ်၏။
အတိုင်းမရှိ ရှည်လျှား၏ ဟု
ချင့်ချိန်က ၍ ယနေ့မှစပြီး...
Posted by Sai Sai at 9:54 PM0comments
သူ ငါ ချမ်းမြေ့ လူ့ဓလေ့။
တူနေ တူသွား အတူနားပြီး
ပြည်တွင်းပြည်ပ (မြန်မာ) ပြည်သူ သားတို့
Posted by Sai Sai at 1:55 PM0comments
Green Label and Me....
မနေ့က ဘာဖြစ်မှန်းမသိ၊ တော်တော့ကိုအိပ်ချင်နေသည်။ ညနေ ၆ နာရီလောက်ဘဲရှိအုံးမည် ထင်ပါရဲ့ အိပ်လိုက်သည်။ အိပ်နေတုံး ဖုန်းပိတ်ထားဖို့မေ့နေခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ ည ရ ကျော်တော့ ကူမင်းက ပြန်လာတဲ့ သူငယ်ချင်း ဖုန်းလာပါသည်။
စိုင်းစိုင်း ဘယ်မှာလဲတဲ့။ ငါ့ကိုလေဆိပ်ကိုလာကြိုပါဦး ဆိုလို့ ကမန်းကတန်းထပြီး လေဆိပ်ကိုသွားပါတယ်။ သူနဲ့တွေ့တော့ ရော့ မင်းတွက်တဲ့ ဘာများပါလိမ့်။ ဖွင့်ကြည့်တော့ ဟိုက်... Green Label 1 liter ကြီး။ ကျေးဇူးပါ တယ်ရင်း
အိမ်ရောက်တော့ သူပေးတဲ့ Green ကိုဖွင့်ပြီး သောက်လိုက်တာ လက် ၄ လုံးလောက် ကုန်သွားတယ်။
Posted by Sai Sai at 12:14 PM0comments
Shan New Year pictures
ဘလောက်ကို အလည်လာခဲ့ကြတဲ့ တယ်ရင်းများ အားလုံး ဆောရီးပါဗျာ။ ကျနော် ဘလောက် မရေးဖြစ်တာ လည်း ကြာလှပါပြီ။ လျှောက်လည်နေတာနဲ့ ဘလောက်ဖက်ကို မလှည့်နိုင်။ တယ်ရင်းတွေရဲ့ ဘလောက်တွေလည်း မလည်ဖြစ်ပါ။
ဒီနှစ် ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပဲွကို ပိင်းလုံ ဆိုတဲ့ရွာ ကိုရောက်ခဲ့ပါ။ ယိုးဒယားနယ်စပ်က ရွာဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည် လဲချားနှင့် နီးပြီး ချင်းမိုင်ကနေ သွားရင် ၄ နာရီလောက်သွားရပါတယ်။ အဲဒီပဲွမှာ လူတွေအတော့ကို စည်ကား လှပါတယ်။
မီးပုံးပျံ လွတ်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်
အကများဖြင့် ဖျော်ဖြေနေကြသော ကလေးသူငယ်များ
ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပဲွသို့ အလည်လာကြသော ကလေးသူငယ်များ
Posted by Sai Sai at 12:26 PM0comments
Never break four things in your life "Trust, Promise, Relation and Heart" because when they break they don't make noise but painsalot... (Charles)
I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure. (Thomas Edison)
Every one thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. (Leo Tolstoy)
If someone feels that they had never madeamistake in their life, then it means they had never triedanew thing in their life. (Einstein)
Posted by Sai Sai at 12:04 AM 16 comments
အင်တာနက်မှာ မမွေနှောက်တာလည်း ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့ဘဲ ဟိုမွေ ဒီမွေနဲ့ Songza ဆိုတဲ့ ၀က်ဆိုဒ် သွားတွေ့တယ်။ သီချင်းများစုထားတဲ့ music search engine လေးတခုပေါ့။ သီချင်းတွေတော်တော် များများရှိပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ သီချင်း တော်တော် များများကိုလည်း youtube နဲ့လင့် ထားတာတွေ့ ရတယ်။
သီချင်းတွေကိုလည်း embed လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘလောက်မှာ ထည့်လို့ရတယ်။ သီချင်းတွေကို Download တော့လုပ်မရဘူးဗျ။
Posted by Sai Sai at 3:18 PM0comments
Most frequently searched keywords on Google Search
ု"Sex" ဆိုတဲ့ keyword ဟာ အီဂျစ်၊ အိန္ဒိယ နှင့် တူရဂီ နိုင်ငံတွေက Google search engines မှာ ရှာတဲ့ ထိပ်ဆုံးက keyword ဖြစ်တယ်တဲ့။
မက်စီကို၊ ဂျာမဏီ နဲ့ သြစတိလျ မှာတော့ "Hitler" ဆိုတဲ့ keyword ထိပ်ဆုံးက Google search engines မှာ ရှာတယ်တဲ့။
"Gay" ဆိုတဲ့ keyword ကိုတော့ ချီလီနိုင်ငံ ပြီးတော့ မက်စီကို နဲ့ ကိုလမ်ဘီယာ နိုင်ငံတွေက အများဆုံးရှာတဲ့ keyword ပါတဲ့။
Google search မှ တခြားသော keyword များ (in order from first to third place):
“Jihad”–Morocco, Indonesia, Pakistan
“Terrorism”–Pakistan, Philippines, Australia
“Hangover”–Ireland, United Kingdom, United States
“Burrito”–United States, Argentina, Canada
“Iraq”–United States, Australia, Canada
“Taliban”–Pakistan, Australia, Canada
“Tom Cruise”–Canada, United States, Australia
“Britney Spears”–Mexico, Venezuela, Canada
“Homosexual”–Philippines, Chile, Venezuela
“Love”–Philippines, Australia, United States
“Botox”–Australia, United States, United Kingdom
“Viagra”–Italy, United Kingdom, Germany
“David Beckham”–Venezuela, United Kingdom, Mexico
“Kate Moss”–Ireland, United Kingdom, Sweden
“Dolly Buster”–Czech Republic, Austria, Slovakia
“Car bomb”–Australia, United States, Canada
“Marijuana”–Canada, United States, Australia
“IAEA”–Austria, Pakistan, Iran
All the abovementioned data has been compiled from 2004 to the present retrievable on the “Google Trends” website.
Posted by Sai Sai at 10:13 PM0comments
သန့်ဇော်မင်း က စိုင်းစိုင်း အိတ်ထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲတဲ့ဗျ။ ရေးပါဦးလို့သူ့ဘလောက်မှာ တက်ထားတယ်။ ဒါနဲ့ ..... ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်သွားခြင်းပါ။
ကျနော့်ကျောပိုးအိတ် က နည်းနည်းကြီးသည်။ လိမေ္မာ်နှင့် အနက်စပ်ကြား Targus ဖြစ်ပြီး သွားလေရာ မပါမဖြစ်။ အိတ်အပြင်ဖက်မှာ Zip က ၅ ခုရှိသည်။ အိတ်အရှေ့မှာ ၃ ခု၊ ဘေးမှာ ၁ ခု၊ နောက်မှာ securtiy pocket ဆိုပြီး ရှိသေးသည်၊ နောက်က အိတ်ကိုတော့ မည်သူ့မှ မမြင်ပါ၊ ကျနော် လွယ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိတ်ထဲတွင်လည်း အိတ် သေးသေး ကွေးကွေးလေးများ ထပ်ရှိနေသေးသည်။
ကျနော့်အိတ်ကို ပထမဦးဆုံး ဖွင့်ကြည့်မည်ဆို မြင်ရမှာတော့ ဘောပင် ၃ ချောင်း၊ cutter တခု၊ ခြေသည်းလက်သည်းညှက်၊ နားဂျက်၊ Mp3 ၊ ကဏန်းပေါင်းစက်၊ USB cable, Bluetooth divice, GPS များမြင်ရမှာပါ။
နောက်ထပ် Zip ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက် မယ်ဆိုရင်၊ CD တွေစုထည့်ထားတဲ့ အိတ်၊ CD Marker pen, Planner, သွေးတိုင်းတာသည့် ကိရိယာနှင့် သွားတိုက်ဆေးသွားတိုက်တံ တွေရှိပါ လေရဲ့။ ညာဖက်ရှိ ဘေးဖက် Zip ကိုတော့ အမြဲသတိထားရသည်။ ထို Zip များပွင့်နေ လျှင် ကျနော့်ဘဝပျက်ပါပြီ။ ညာဖက် Zip ကိုဖွင့်၍ အတွင်းသို့ လက်လျှိုလိုက်လျှင် Notebook နှင့် ရစ်ပတ် ရှုပ်ထွေး နေသော ၀ါယာကြိုးနှင့် Adapter ထည့်ထားသည်။
နောက်ဖက်က Security pocket ဖြစ်သော အိတ်ထဲတွင် ကျနော်နှင့်ပတ်သက်သည့် အရေး ကြီးသည့်ဟု ဆိုရသော စာရွက်စာတမ်းအချို့ကို ထည့်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဖယ်ဘက်ရှိ သေးငယ်သည့်အိတ်လေးတွင် မှတ်စုစာအုပ်နှင့် Dictionary ရှိပါလေရဲ့။
ကျောပိုးအိတ်၏ ညာဖက်ကြိုးပေါ်ရှိ ချိတ်ဆဲွ အိတ်သေးလေးတွင် iPAQ ကို မဆန့်တဆန့် ဖျစ်ညစ်သွပ်ထည့်ထားသည်။
ကျနော်အမြဲမေ့ကျန်လေ့ ရှိသည့် သော့တွဲများ မှာလည်း ကျနော့်အိတ်ထဲတွင် ကလစ်နှင့်ကြိုး တခါတည်းတွဲထားလိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျနော် သည် အင်မတန် မေ့လွန် ကဲ သူတယောက်ဖြစ်ကြောင့်တည်း။
မမမယ်လိုဒီမောင် အိတ်ထဲမှာ ဘာတွေများရှိလဲလို့ .... သွန်ချ ပေးပါဦးနော်...
Posted by Sai Sai at 9:28 PM0comments
ဒီအပတ် weekend ကတော့ ကျနော့်အဖို့ သောက်သလဲွ ဖြစ်ယုံတင်မက တယ်ရင်းများပါ ခံစားသွားရတယ်။ ဖြစ်ပုံက သောကြာနေ့ည တယ်ရင်းတယောက် အော်စီက ပြန်လာတော့ ၀ီစကီ ၃ လုံး ၀ယ်လာတယ်။ ၁ လုံးတော့ သူ့ တယ်ရင်း နဲ့ သောက်လို့ကုန်သွားခဲ့ပြီတဲ့။ ကျန်တဲ့ ၂ လုံးကို ကျနော့်တို့ ၄ ယောက်လိုက်တာ လောက်တောင်မလောက်ဘူး။
၀ီကီကလည်း ၁၆ နှစ် ၂၁ နှစ် (သက်တမ်း) သောက်ရတာလည်း ကောင်းတယ်လေ။ ဒါကို မလောက်လို့ Black Label တစ်လုံး ထပ်သောက်လိုက်တယ်။ လူကို ပြန်လှန်သွားတာဘဲ။ ဒါကို ချစ်တယ်ရင်းတွေက တော်သေးဘူးတဲ့ဗျ။ မနိုင်ဘူး တကယ့် ကြွက်တွင်းတွေ။ အိမ်အပြန် လမ်းမှာ နောက်ထပ် Black Label တစ်လုံးထပ်ဝယ်ပြီး တယ်ရင်း အခန်းအောက် က ဆိုင်မှာ ထိုင်သောက်ကြတယ်။ မနက် ၃ နာရီခဲွသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ပါ။ ၀ီစကီ ၄ပုံ ၃ ပုံလောက်ကုန် သွားတော့ အားလုံးလည်း Give up ဖြစ်ပြီး အိမ်ပြန်အိပ်ပါလေရဲ့။
မနက်က မိုးမလင်းသေးဘူး ဖုန်းကလည်း တကွမ်ကွမ်လာ။ သောက်မြင်ကပ်တာနဲ့ ဖုန်းပိတ်လိုက် တယ်။ ဖုန်းဖွင့်တော့ အား ခေါ်ထားလိုက်တဲ့ Call တွေ အများနည်းပါလား။ Call တွေကို ကြည့်တော့ အိုမိုင်ဂွတ် အဥ္စလီ ခေါ်ထားတဲ့ Call တွေက ၅ Call ။ တခြားလူတွေရဲ့ Call တွေကျန် သေးတယ်။
ကျနော် အဥ္စလီ ကို ဂတိတွေ ပေးထားတာ မေ့နေတာ။ သူက စနေနေ့မှာ ဘဝခရီး အခန်းမှာ တခုခုချက်ပြုတ် စားသောက်ဖို့ ခေါ်ထားတယ်လေ။ ကျနော်လည်း ဘဝခရီး အခန်းကို ခရီးဆက်ရတာပေါ့။ မိုးကလည်း ရွာ ရာသီဥတုက လည်းအေး၊ လူကလည်း အမူးမပြေသေးနဲ့ ဘဝခရီးအခန်းရောက်တော့ အဥ္စလီက နည်းနည်းကောင်းပြီး Galk ကနေ သူ့ညီနဲ့ပွား နေပေါ့ဗျာ။ ဘဝခရီးက တော့ မီးဖိုခန်းမှာ ဒုန်းဒုန်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ချက်ပြုတ်နေ လေရဲ့။ ခွန်လင်း ချစ်သူ ဆိုတဲ့ လူက နည်းနည်းစသောက်နေပြီ အဥ္စလီနဲ့အတူ။
ခွန်လင်းချစ်သူက ခွက်ထဲ ရေခဲ နဲ့ ဘရမ်ဒီ ထည့်လိုက်တယ် ရော့သောက် စိုင်းစိုင်းတဲ့။ မိုးမိလာတဲ့ ကျနော်လည်း ဘရမ်ဒီ အေးအေးလေးကို တကြိုက်ထဲသောက်လိုက်တာ။ ပူထူ သွာ ပြီး မနေ့က မူးနေတဲ့ ၀ီစကီ အရှိန်တောင် လှန့်ပြီး ပြေးသွားတယ်။ ခွန်လင်းချစ်သူက တော့ သွားစရာရှိတယ်ဆိုပြီးလှစ်သွားတယ်။
နောက်တနာရီလောက် ကြာတော့ ဘရမ်ဒီ တလုံးလည်း ပုလင်းများ ပေါက်သလားလို့ ထင်ရအောင် ခမ်းသွားတယ်။ ဒါနဲ့ အဥ္စလီတို့ ဇတ်လမ်းက စပြီလေ။ ထမင်းစားမယ် လုပ်တော့ မစားဘူး အိမ်ထုပ်သွားပြီး သူ့အိမ်မှာ သွားစားမယ်တဲ့။ ဘဝခရီးရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဖောင်းပြမှုကြောင့် မကြေမနပ်တဲ့ အဥ္စလီ ခမျာ ထမင်းစားချင် မစားချင်တဲ့နဲ့ စားတာ ၁ ပန်းကန် အမောက်ကြီး ကုန်ပါလေရော။
အဥ္စလီအိမ်ကို ချီတက်ကြပါလေရော။ အဥ္စလီက ဘရမ်ဒီထပ်ဝယ်လာတယ်။ ကျနော်တော့ မသောက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ကာလာအိုကေ ဆိုမယ်ပေါ့။ အဥ္စလီနဲ့ စိုင်းစိုင်း တို့ ကာလာ အိုကေ ဟစ်လိုက်တာ ဘဝခရီးတော့ ရေရေလည်လည် အီးအီးမှန်သွားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ထိုင်နား ထောင်နေရရှာတယ်။
အဥ္စလီ တို့ဟစ်တာက မျိုးကြီး၊ လေးဖြူတဲ့ အားပါးပါး.. လေးစား လောက်တယ်။ သိချင်ရင် ဘဝခရီးကို သာမေးကြည့်လိုက်တော့ဗျို့။ (ဟစ်တာနဲ့ ရစ်တာကို) ကျနော်တော့ မရေးတော့ ဘူး။ ကျနော်ရေးရင် သူတိုက်တဲ့ ဘရမ်ဒီ၊ သူအခန်းက ကာလာ အိုကေ သွားဆိုတဲ့ ကျနော် ကျေးဇူးကန်းရာရောက် သွားမှာဆိုးလို့ပါ..ဟဲ...ဟဲ... ရေးတော့ ဘူးနော် အကိုကြီးအင်... တော်ဘီ.. ချိတ်စိုးနဲ့နော် ချတာ.ချတာ..
Posted by Sai Sai at 8:41 PM0comments
သုံးနေကျ ကီးဘုတ်တွေ သုံးရတာ ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတယ်။ ကျနော့် ကွန်ပြူတာ လည်း ဒီလိုကီးဘုတ်တွေ နဲ့ဘဲ လိုက်ဖက်တယ်ထင်ပါရဲ့ အမြဲတန်း ဒီကီးတွေဘဲ နှိပ်နှိပ်နေရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုကီးဘုတ်မျိုးကိုဘဲ တပ်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ မကောင်းဘူးလားဗျာ။
Posted by Sai Sai at 4:47 PM0comments
Posted by Sai Sai at 8:58 AM0comments
Posted by Sai Sai at 8:47 AM 1 comments
ကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာနဲ့ user အကောင့် တွေကို ပထမဦးဆုံး အကာအကွယ်ပေးတာက passwords ပဲလေ။ ကျနော်တို့ အများစုမှာ passwords ထည့်ရာမှာ များသောအားဖြင့် အဓိက သတိမထားမိတဲ့ အချက် ၂ ခု ပြုလုပ်တတ်တတ်ကြတယ်။
၁။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မှတ်ရလွယ်တဲ့ passwords ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ (ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်)
၂။ passwords များကို စာအုပ်၊ စာရွက် Microsoft word, Notepad မှာ ရိုက်ပြီး မြင်လွယ်တဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားတတ်တဲ့အလေ့ရှိတယ်။
Hacker များဟာ password များကို ခန့်မှန်းပြီး (သို့) password-cracking software များ အသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူတာများ၏ system ထဲကို ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်လာ နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ password-cracking software က password ကို လွယ်ကူစွာ မရှာနိုင်အောင် password ကို mnemonics and numbers များကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
password သည်လည်း သော့ ပါဘဲ။ ကျနော်အိမ်မှာ လူရှိတဲ့ညအချိန် အိမ်တခါး၊ ပြူတင်း ပေါက်များအား သော့မခတ်ဘဲထားရင် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူခိုးဝင်လို့ သူခိုးကနည်း တယ်လို့ တောင် ပြောသွားအုံးမယ်။ ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ အိမ်ကိုခတ်ထားတဲ့ သော့က ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ကျနော်တို့ကွန်ပြူတာကို သော့ကောင်းကောင်းခတ်နိုင်တဲ့ Creating strong passwords ကို ဤနေရာတွင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Sai Sai at 10:11 PM0comments
သူများတွေက အိမ်တွေပြောင်း နေကြတယ်။ ကျနော်မှာတခြား အိမ်တွေတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအိမ်တွေထဲမှာ ဘာမှ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အိမ်ကတော်တော် ဟောင်းနေဘီဆိုတော့ ပြန်လည် မွန်းမံပြင်ဆင်ရမှာ အချိန်တွေလည်းကုန်အုံးမယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကံကောင်းထောက်မစွာ နဲ့ဘဲ မမီက အိမ်လိပ်စာ အသစ်လုပ်ပေးမယ် ယူမလားတဲ့။ ဘာရမလဲ ယူမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ ကျနော့် အိမ်လိပ်စာ အသစ် ကို http://saisai.myamarbloggers.org ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ အိမ်လိပ်စာ အသစ် လုပ်ပေးတဲ့ မမီ ပိုက်ပိုက် အကုန်ကျခံပြီး ဒိုမိန်း ၀ယ်ထားတဲ့ ကိုပီကေ တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
ဒါက မမီ ဆီက Ctrl+C နှိပ်ပြီး Ctrl+V လုပ်ထားတာပါ။
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ မည်သူမဆို bloggers@myanmarbloggers.org ကို email ပို့ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကွန့်မန့်ထဲမှာ ၀င်ရေးပြီးတော့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နာမည် (nick name) ရယ်၊ ဘလော့လိပ်စာရယ်၊ လိုချင်တဲ့နာမည်ရယ် ကိုထည့်ရေး ပေးစေချင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ subdomain အသစ်အနေနဲ့ ထည့်ပေးပြီးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကတော့
-ပင့်ဂိုးလ် (cuttiepinkgold.myanmarbloggers.org) နဲ့
-မိုးလှိုင်ည (moehlaingnya.myanmarbloggers.org) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Sai Sai at 9:14 AM0comments
နက်ဖြန်ခါ မင်းပါးပါး နှလုံးခဲွစိတ် ကုသမယ်ဆိုတော့ မင်းစိတ်လှုပ်ရှားသလို ငါလည်း မင်းနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံး ကောင်းသွားမယ်လို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ စိတ်အေးအေးထား ပြီးနေပါ။ မင်းပါပါး နေကောင်းကျန်းမာသွားမှာပါ။ နေကောင်းကျန်းမာပါစေလို့.. SS
Posted by Sai Sai at 11:41 PM0comments
ကွန်ပြူတာရဲ့ CPU, Cache, Mainboard, Memory အစရှိတဲ့ အမျိုးအစားများကို Check လုပ်မယ်ဆိုရင် CPU-Z ဆိုတဲ့ Freeware သုံးပြီး checking လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရွယ်အစားက 1.13 MB ရှိပါတယ်။ ကျနော်စမ်းသုံးကြည့်တာ အိုကေ အဆင်ပြေတယ်ဗျာ။ CPU-Z ကိုသုံးရင်းနဲ့ screenshot လုပ်ပြီး တင်ထား လိုက်တယ်။
Posted by Sai Sai at 2:13 PM 1 comments
Posted by Sai Sai at 11:33 AM0comments
သီတင်းကျွတ် လပြည့်ညတွေဆို ငယ်စဉ်အခါက အလွန်မှပျော်ပါတယ်။ ဖောက်အိုးတွေ တဗျောင်းဗျောင်း ဖောက်ရသကိုး။ ညအချိန်မှာ ကျနော်တို့ အလည်မပေးသွားပါဘူး။ အခုလို သီတင်းကျွတ် လပြည့်ည ဆိုရင် ညဖက် အလည်သွားရပါတယ်။ ညဖက်လည်မသွားခင် အဖိုးအဖွားများကို သွားကန်တော့ လေ့ရှိတယ်။
အခုများတော့ အဖိုးအဖွားများနှင့် ဝေးကွာနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းဟာ ကျနော့်အား တူလို၊ သားလို သဘောထားပြီး ချစ်ခင် သော အန်ကယ်နှင့် အန်တီ တို့ကို သွားကန်တော့ လိုက်ပါတယ်။
Posted by Sai Sai at 11:55 PM0comments
တခါတခါ အတွေးတွေဝင်ပြီး တော်တော်လေးကို စဉ်းစားခန်းဝင်ဖြစ်တယ်။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အလုပ် လုပ်ရတယ်။ အလုပ်များ မလုပ်ရရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းမလဲ မသိလဲ၊ အဲလိုစဉ်းစား ပြန်တော့လည်း လူရယ်လို့ဖြစ်တာ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး။ အလုပ်ဟူ သမျှ ဂုဏ်ရှိစွလို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား။
တချို့လူတွေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကို ရှာလုပ်ကြပါတယ်။ တချို့များတော့ ကြုံရာ ကျပန်း အလုပ်တွေကို လုပ်ကြရတာ တွေရှိတာပေါ့။
ကျနော်တော့ ကိုယ်ပျော်တဲ့ ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ရတာ နှစ်သက်တယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ် များလုပ်ရရင် ကိုယ့်အိပ်စိုက်ပြီး တောင်လုပ်ပေးတဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။ မအိပ်မနေ လုပ်ပေးတယ်။ ဗော်လန်ဒီယာ အလုပ်ပေါ့ဗျာ။ ငွေ အကြောင်းကြီးဘဲ ပြောတဲ့ သူတွေကို အမြင်ကပ်တယ်။ အထူးသဖြင့် မလိမ့်ဘဲနဲ့ ၂ ပတ်လုပ် သူတွေကို အင်မတန် သောက်မင်ကပ်တယ်။
အခုတော့ ကျနော် ပိုက်ဆံလက်ခံပြီး လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တခုမှာ လုပ်တာ စိတ်ကုန်လာပြီ။ ပိုက်ဆံတော့ အတော် အတင့်ရပါရဲ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်က အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မပြေဘူး။ အလုပ်များလို့လား လို့မေးရင် ပုံမှန်ပါဘဲ။ အလုပ်များတာကို ကျနော် မငြီးညူပါ၊ အလုပ်ထဲက တချို့လူတွေ အပြောင်းအလဲ မြန်တယ်လေ။ (အထူးသဖြင့် ခေတ်စကားအရ ဆိုရင် Bossy ပေါ့) အခုတမျိုးတော်ကြာနေ ၂ မျိုး ၃ မျိုး။ စည်းစည်းလုံးလုံး မရှိတာရယ်၊အလုပ်က သိပ်ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မရှိတာရယ်၊ ကြာလာတော့လည်း အလုပ်မှာ အပျော်တော့ဘူး။ အလုပ်မှာ မပျော်မဲ့ အခြေအနေ ရောက်မှတော့ အဲဒီအလုပ်ကို မလုပ်ရုံသာ ကျန်တော့တယ်။ ဖြေရှင်းချက်တွေ ပေးစရာ လိုနေသေးလို့လား။ အလုပ်လုပ်ရပြီး စိတ်မချမ်းသာဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှု တွေများတယ်။ တချို့တချို့သော လူများက ကိုယ့် အလုပ်ကို မလုပ်ဘူး သူများကိစ္စတွေကို ၀င်ရှုပ်တယ်။ တချို့က ဆိုးတယ် ကိုယ့်အလုပ်ကို တောင် မလုပ်ဘူး။ အဲဒါတွေကို လိုက်လုပ်ပေး နေရတယ်။ ဒါတောင် သောက်သလဲွ ပြောခံရသေးတယ်။ ဘယ်လောက်များ လေဖို့ ကောင်းလဲဗျာ.. လေတယ်.. တကယ်ပါ.. တကယ်ပါ..ဗျာ... လေတယ်..
ဒီတခါတော့ ကိုယ့်လှေကိုထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်၊ ကိုယ်မြင်းကိုဆိုင်း စစ်ကိုင်းဘဲ ရောက်ရောက်၊ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ် ဆိုသလို လုပ်လိုက် ချင်ပါဘိဗျာ။
Posted by Sai Sai at 3:55 PM0comments
ပိုက်ဆံအသစ်မြင်ဖူးလားတဲ့ ကျနော့်အမက Gtalk ကနေ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ သူကျနော့်ကိုပို့ ပေးလိုက်တော့ ဒေါ်စုပုံနဲ့။ နှစ်ချိုက်မိလို့ ဘလောက်ထဲ အမှတ်တရ တင်ထားလိုက်မိ တယ်။ ကျေးဇူးပါ ပီပီခမ်း....
Posted by Sai Sai at 8:33 PM0comments
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ စက်က ၁၀ လလောက်ကြာခဲ့ပြီဆိုသော်လည်း သုံးရတာ နည်းနည်း နှေး သလိုခံစားလာမိတယ်။ ဒါနဲ့ စက်ဝယ်တုံးက ပါလာတဲ့ recovery dvd ၃ ချက်ကို ထည့်ပြီး ကလိလိုက်မိတယ်။ တချပ်ပြီးတချက် ထည့် ပြီး တော့ နံပါတ် ၃ အချပ်ရောက်တော့ မစောင့် နိုင်တာနဲ့ အိပ်လိုက်တယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ စက်အသစ် ၀ယ်စဉ်အခါက အတိုင်း ပြန်ဖြစ် နေလေရော။ ပြီးတော့ My computer ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အိုမြတ်စွာဘုရား ဘာမှကို မရှိတော့ဘူး။ Drive လည်း local drive C ဘဲကျန်တော့တယ်။ ကျနော့် Dada တွေသိမ်းထား တဲ့ local drive D ကြီးဘယ်နတ်ပြည်တက်သွားလည်း မသိဘူး။ ဘာဆိုဘာမှကို မကျန်တော့ ဘူး။
အချို့ Dada တွေကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်တုံးက DVD ထဲမှာရေးထားမိလို့ပြန်ရတယ်။ local drive C လည်း 120 GB ဖြစ်တော့ .. partition ခဲွမယ်ဆိုပြီး. Partition magic ကိုရှာ တယ်. ပထမဦးဆုံးဒေါင်းလုပ်လုပ်တော့ ပြင် သစ် version ဖြစ်နေတော့နောက်တခါ ဒေါင်း လုပ် ပြန်လုပ်တယ်။ ဒီတခါတော့ရဘီပေါ.. Partition Magic7တဲ့ Install လုပ်တော့ error ကျတယ် သုံးမရပြန်ဘူး။ ရှာတယ်မွေတယ်. ပိုက်ဆံပေးပြီးလည်းမဝယ်ချင်ဘူးလေ။အင်တာ နက်မှာ အသားကုန်ဖြဲရှာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ partition magic 8 နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်။
အခုတော့ သုံးနေကျ program တွေကို install လုပ်၊ Setting တြွေပင် နဲ့ ဘာမှကို မလုပ်ဖြစ် လိုက်ဘူး။ ဒီနေ့တနေကုန် အချိန် ၉ နာရီလောက်ကုန်သွားတယ်။ Data တွေတော့ပြန်မရ တော့ဘူး။ Data recovery တွေနဲ့လည်း ပြန်မရှာတော့ဘူးလေ။ သံယောဇဉ်ဖျက်လိုက်ဘီ။
Posted by Sai Sai at 4:43 PM0comments
ဒီနေ့ ကျနော့် တယ်ရင်းတယောက်အခန်းမှာ Networking သွားလုပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးတွေကို ရှုပ်ယက်ခတ် နေတာဘဲ။ Netwroking လည်းဆင်လို့ ပြီးရော သူ့ကွန်ပြူတာ တွေရဲ့ Setting တွေကို မပြင်နိုင်အောင် Disable လုပ်မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားကြပါတယ်။
အကျင့်မကောင်းပုံများ Control Panel ကို Disable လုပ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ကျနော်ဘယ်မှာသွား ပြင်လဲဆိုတော့ Window ရဲ့ policies ထဲမှာ သွားပြင်လိုက်တယ်။ အဲဒီ policies ထဲမှာ DWORD အသစ်တခုလုပ်လိုက်ပြီး Name ကို NoControlPanel လို့ပေးလိုက် တယ်။ အဲဒီ Data ရဲ့ Value ကို 1 လိုက်ထားလိုက်ပြီး Window ကို restart လုပ်လိုက်တော့ Control Panel မရှိတော့ဘူး။
Value Name: NoControlPanel
Posted by Sai Sai at 11:23 PM0comments
Right Click လုပ်ပြီး New Folder တခုတည်ဆောက်လိုက်ပါ။
New Folder ကို rename လုပ်ကာ ၄င်း Folder Name တွင် Alt+0160 ရိုက်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် အဲဒီ New Folder name ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ အမည်မရှိတဲ့ Floder ပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီး Properties ထဲက Customize tab လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီ ထဲမှာ Change Icon ဆိုတဲ့ bottom လေးကို ဆက်လက် နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
Change Icon for Folder window လေးပေါ်လာတာတွေလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲက no image တခုကိုရှာပြီး ပြောင်းလိုက်ပါက ယခင်ကတည်ဆောက်ထားတဲ့ Folder ပျောက် သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ လျို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဂိမ်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ စသည်ဖြင့်.. လျှို့ဝှက်စွာ သိမ်းစည်းထားနိုင်ပါကြောင်းပါခင်ဗျာ။
Posted by Sai Sai at 10:38 PM0comments
အေးမြတဲ့ ဆောင်းရနံ့ ကွေ့ကောက်တဲ့ လမ်းများကို ဖြတ်ကျော်ကာ အိမ်ပြန်လမ်းဆီသို့
Posted by Sai Sai at 1:51 PM0comments
အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မဟုတ်လား မင်းရဲ့ မွေးနေ့လေ။ မင်းမွေးနေ့ဆိုလို့မင်းဟန်း ဖုန်းကို ဆက်ပြီး Happy Birthday လို့ပြောမလို့ပါဗျာ။ ဟိုက်... မင်း အမားနဲ့တွေ့တော့ မင်းအိမ်မှာဆိုလို့ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး။ ဖုန်းခေါ်လို့ရတဲ့ အခါတော့လည်း မင်းအလုပ်တွေ ရှုပ်နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် Happy Birthday အိုက်လား။ မင်းအတွက်လက်ဆောင်.......
ငါလည်း ပိုစ့် အသစ်တွေ မတင်ဖြစ်တာ ကြာပြီလေ။ အခုတော့ မင်းရဲ့ မွေးနေ့ဆိုပြီး ပိုစ့် အသစ်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်ကွာ။
Posted by Sai Sai at 7:59 PM3comments
Create home page tabs on Firefox
Firefox မှာ IE7 လိုမျိုး ဖွင့်တာနဲ့ home page tabs တွေပေါ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် အောက်ကနမူနာပုံ လေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော် Firefox မှာတော့ ဒီလိုလုပ်ထားတယ်။ Tools > Options> Home Page >
မှာ ဒီလိုရိုက်ထားတယ်။ https://mail.google.com | http://sailashio.blogspot.com
Firefox ဖွင့်လိုက်ရင် Gmail နဲ့ blog ဆိုတဲ့ tabs ၂ ခု ပွင့်လာပါတယ်။ သိပြီးသားများ ဖြစ်နေလျှင် Sorry ပါခင် ဗျာ။
Firefox home page tabs
IE7 home page tabs
Posted by Sai Sai at 10:58 AM0comments
If you are trying to track down why your computer is running so slowly, try using this simple DOS command from Digital Inspiration to uncoverapossible problem:
Posted by Sai Sai at 8:50 AM0comments
ယနေ့တနေကုန် ရန်ကုန်မြို့တွင် မိုးများ အဆက်မပျက်ရွာ သွန်းမှုကြောင့် မြေနီကုန်း ပလာဇာ၊ ဂမုန်းပွင့်နှင့် ဒဂုံစင်တာရှေ့ လမ်းမများတွင် ရေလွမ်းမိုးကာ ရေများဒူးဆစ် ကျော်ကျော်ရှိ နေလေပြီ။ ဒဂုံစင်တာ မြေအောက်ခန်း ကားပါကင်တွင် ရေဝင်ကာ ကားများအလျှင် အမြန်ပြန် ထုတ်ကာ နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု ၄င်းရှေ့တွင် သဲအိပ်များဖြင့်ပိတ်ကာ ထားလေပြီဖြစ်သည်။ မြေနီကုန်းပလာဇာ မြေအောက်ကား ပါကင်ထဲတွင် ရေမဝင်သေး ပါ..သဲအိပ်များဖြင့် ပိတ်ကာထားပြီးဖြစ်သည်။
ရွှေတောင်တန်းလမ်း၊ ၁၅ လမ်း များတွင်လည်း လှေလှော်ချင် သူများ လှော်နိုင်ကြပြီ။
ဒဂုံစင်တာမြေအောက်ခန်းရှိကားပါကင်မှ ကား များ အလျှင်အမြန်မောင်းထွက်နေပြီ
မြေနီကုန်းပလာဇာနှင့် ဂမုန်းပွင့်ရှေ့လမ်းမရှိကားများ လှော်ခတ်နေပြီ
မြေနီကုန်းပလာဇာနှင့် ဂမုန်းပွင့်ရှေ့လမ်းမရှိ ကားများ လှော်ခတ်နေကြပြီ
ပုံများကိုတင်ခွင့်ပေးခဲ့သော tzm အားကျေးဇူးကမ္ဘာ
Posted by Sai Sai at 1:50 PM0comments
Be careful using ATM
ကိုယ့်နှိပ်သွားတဲ့ ATM pin code များကို မှတ်ယူရန် keypad
ကိုယ့်နှိပ်သွားတဲ့ ATM pin code များကို မှတ်သားယူရန် keypad နောက်ကြောဖက်
ကိုယ့်နှိပ်သွားတဲ့ ATM pin code များကို မှတ်ယူရန် keypad တပ်ဆင်
မူလ ATM Machine
ATM Card ပေါ်မှာရှိတဲ့ Data ကို Scan ဖတ်ရန် ကိရိယာများ
ATM Card ပေါ်မှာရှိတဲ့ Data ကို Copy နိုင်မည့်ကိရိယာ
ATM Card ပေါ်မှာရှိတဲ့ Data ကို Copy ရန်ကိရိယာကို တပ်ဆင်နေစဉ်
ATM Card ပေါ်မှာရှိတဲ့ Data ကို Copy ရန်
Pin Code များကို Copy ကူးယူရန် keypad တပ်ဆင်ပြီး
မူရင်း ATM Machine (keypad မတပ်ဆင်မီ)
Posted by Sai Sai at 8:42 PM0comments
Some abstracts of password protection
Don't rely on Windows passwords to protect your information.They are easily broken.
Create passwords which are 8 characters or longer.You can also useashort sentence as your password.
It is better to write down you passwords and keep them safe, than to haveashort, easy to guess password.
Use numbers, small letters, capitals and symbols in your password.
Do not use passwords which can be directly related or linked to your personal life or interests.
Do not share or tell anyone your important passwords.
Change your passwords every 3-6 months.
Remember that there are many programs available free on the Internet, which will identify your Windows password, wireless network encryption and just about any other type of computer password you may have.
Posted by Sai Sai at 11:28 PM0comments
Passenger plane crash in Thailand's Phuket on Sunday
ဒီနေ့ဘဲ ဘီဘီစီထိုင်ကြည့်နေရာက ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးကက်ဒေသမှာ One-Two-Go Airlines မှ ခရီးသည်တင် လေယာဉ် ဟာ ပြေးလမ်းအဆင်းမှာ ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့။ အနည်းဆုံး ရ၄ ဦး သေတယ်လို့ဆိုပြီး ၄၂ ယောက် က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရတယ်တဲ့၊ ၁၄ ယောက်တော့ ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီလေယာဉ်က ခရီးသည် စုစုပေါင်း ၁၂၃ ယောက် သယ်ဆောင်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များလည်း ပါတယ်တဲ့။ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲဗျာ။
Posted by Sai Sai at 10:51 PM0comments
Life vs wish
If you wereapearl
I would hold you in my mouth.
If you werealotus
I would beahyacinth.
If you were an orchid
I would beatree on which you grow.
However in an enslave life
Where our rights perish under army boots.
Even love can not last
Oh.. dear …….
Posted by Sai Sai at 11:00 AM0comments
Sometimes I feel likeawalk in the desert.
Sometimes I feel likeawalk in the rain.
Sometimes I feel likeawalk in the snow.
Sometimes I fell likeasleepy in the blue ocean.
I laid down beside you, I gave my life to you
Don't make my scenes wake up
Don't make me fall in love you again please...................
The best and most beautiful thing in the world
it can not be seen or even touched but ...........
it can only be felt with heart
ကျနော် ဘာတွေ ရေးချသွားလဲ မသိတော့ပါ။ ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိပါ။ နေမြင့်လေ.. အရူးရင့်လေ ဆိုသလို... သေချာပါဘီ... ရူးသွပ်သွပ် ဖြစ်နေလေပြီ။
Posted by Sai Sai at 9:00 PM0comments
Posted by Sai Sai at 6:59 PM0comments
ဒီ Application က ယူနစ်တော်တော်များများကို ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ အလွယ်တကူ လည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ အပြင် Free လည်းသုံးလို့ရတယ်လေ။ distance, temperature, volume, time, speed, mass, power, density, pressure, energy စသဖြင့် ..ယူနစ် တွေပေါ့.... [Download]
Posted by Sai Sai at 4:30 PM2comments
Assignment Deadline ကလည်း ဒီအပတ် သောကြာနေ့ ဆိုလို့ အတင်းဖျစ်ညစ်ပြီး ထိုင်ရေး နေတာလဲ မပြီးနိုင်သေး။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်အောင် ဆိုလို့ youtube ကိုသွား ပြီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ Rambo IV ကို ကြည့်မိလိုက်တယ်။ အားပါး .. အားပါး ဖိုက်တင်..အပြည့်..
ဇတ်လမ်းကတော့ အဖိနှိပ်ခံ ကရင်တောင်သူ လယ်သမားတွေကို ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး လူ့အခွင့် အရေးအသင်းက သွားရောက်ကူညီတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့ လူတွေကို ရမ်ဘိုက သွားကယ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့..။ ဖိုက်တင် ကတော့ အသားကုန်ပေးတာ..။ ဇတ် လမ်းထဲမှာ ရမ်ဘိုက မြန်မာလိုလည်း ပြောတယ်။ ဇန်နဝါရီ 2008 မှာကြည့်ရ မယ် ဆိုဘဲ..
Posted by Sai Sai at 4:10 PM0comments
Posted by Sai Sai at 3:49 PM0comments
Happy Birthday Ying !
Posted by Sai Sai at 9:37 AM0comments
Posted by Sai Sai at 3:15 PM2comments
Sai: အကို့ (ကုလားသံနဲ့) ပြန်သေးဝူးလားဗျ ...ကြိုးစားတယ်ဗျာ.
inzali: အလုပ်အခုမှ ပီးတော့တယ် (ဟူး ...)
inzali: မဟတ်လားနဲ့ ခင်ဗျားကိုလဲ Tag ထားတယ် ... ရေးရမှာနော် ... ဟဲ ဟဲ
Sai: ကွန်းမန့်တောင်ပွတ်လိုက်ဘီ ရေးမှာပေါ့ဗျာ.အခုတောင် ချမ်းအောင် အင်္ကျီချွတ်ပြီး အဲယားကွန်းတွေ အသားကုန် လွတ်ထားတယ်..ဟဲ ဟဲ.. ခံစားရအောင်လို့လေ. ဒါမှပိုစ့်ကောင်း ကောင်းထွက်မှာဗျ.. ဟတ်.ဟတ်..........
inzali: သြော် ... အဲယားကွန်းအေးကြောင်း ကြွားတယ်ပေါ့ ... ကျနော်ဆီက အဲယားကွန်းက မအေးဘူးဗျ ... ဖွင့်လိုက်ရင် မအေးဘဲ ပူနေတယ် ... ဒွတ်ခပဲ...ဒွတ်ခ..
Sai: ခင်ဗျားအဲယားကွန်းကြီးက..ရာသီဥတုနဲ့..ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ.. မဟုတ်ရပါဗျာ..အထင်တွေ မလဲွပါနဲ့..ပိုစ့်ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်အောင်လို့ပါ.
inzali: နောက်တာပါ ... Tag လုပ်ထားတဲ့ လူတွေ အတော်များများ ပြန်ရေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ််
inzali: ပြန်မရေးရင် Blacklist ထဲ ထည့်လိုက်မှာနော် ... ဘာမှတ်လဲ :D
inzali: ဟာဟ ... မရေးရင် ဘဝခရီးဆီမှာ အောက်လမ်းပညာနဲ့ တစ်သက်လုံး ဘလော့ ရေးလို့မရအောင် လုပ်ပစ်မှာ ... ဒန် ဒန့် ဒန်......
ဒီလိုနဲ့ ..... ကိုဘဝ ရဲ့ အောက်လမ်းပညာကို ကြောက်လို့... အဥ္စလီ ရဲ့ တက်ကို..ရေးနေရပြီ..လေဗျာ..
ခိုက်ခိုက်တုံအောင် အေးလှတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ မနက် ၅ နာရီခဲွလောက်ထ ပြီး တရုတ်ကျောင်းသွားရတဲ့ အဖြစ်လေးများကို မြင်ယောင်တုံး။ လမ်းသွားရင် ရှေ့ ၅ ပေလောက်ဆိုရင် ဘာကိုမှ မမြင်ရဘူး နှင်းတွေဖုုံးလို့ပါ။ နှင်းတွေကျ ပုံများ အိမ်ရှေ့က မြက်ပင်တွေ၊ ခေါင်မိုးပေါ်က သက်ကယ်တွေ ဆိုရင် ဖွေးဖွေးကို ဖြူလို့ပါ။ ကျောင်းရောက်တော့လည်း လက်တွေတောင့်လို့ ဘောပင်ကိုတောင်မှ ကိုင်နိုင် စွမ်းမ ရှိဘူး။
ညဆိုရင် အိမ်ရှေ့ ဓါတ်မီးတိုင် အောက်မှာ ပုရစ်လေးတွေ ဖမ်းကြတဲ့ အဖြစ် လေးတွေ...............
မီးဖိုဘေးမှာဝိုင်းထိုင်ပြီး.. မေမေက အရသာရှိလှတဲ့ နှမ်းထောင်းခေါပုတ် ထဲမှာ ပဲပြုတ်ညှပ်ပြီး ကင်ကြွေးတာ လေးတွေ...............
စနေနေ့ မနက်တိုင်း မေမေ ပြုတ်ကြွေးတဲ့ ဘဲသား ဆန်ပြုတ်လေးနဲ့..နံပြားတွေ စားရတာလေးတွေ.......
ညအိပ်ရင် ဂွမ်းစောင် ၃ ထပ်လောက်ခြုံပြီး အိပ်ရတယ်.. ဒါတောင်အေးတုံး..
ဪ ၁၀ အောင်ပြီး.. မန္တလေးမှာ ဂျီတီအိုင် တက်တော့ မန်းတုန်အောင် လမ်းဆုံက ဟစ်ချင်တော့ ဆိုတဲ့.. အတိုင်း.. အခြားဒေသက ဆောင်းနဲ့ မတူအောင်..အရိုးထိအောင် စိမ့်ပြီးအေးတယ်.....
ဪ..... ယပလက် ဆောင်းကတော့..............လွမ်းစရာဟူ၍ မရှိသလောက်... တော်ဘီဗျာ.. ကျေနပ်ပြီ မဟုတ် လား ..ကိုအဥ္စလီရေ.....
မည်သူတွေကို Tag လုပ်ရမည်နည်း? တယ်ရင်းတွေကလည်း များများမရှိတော့..ဟုတ်ပြီ.. တချိန်တုံးက.. ကျနော့်ကို Tag လုပ်တဲ့လူတွေကို ပြန်ပြီး..
Tag လုပ်ထားတဲ့ တယ်ရင်း ၂ ယောက် ဆောင်းအကြောင်းလေးကို ရေးပေး ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ...
အဥ္စလီ (ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာရောင် ဆံပင်ဂုတ်ထောက်နှင့် ပရိုဖိုင်းမှာတော့ ကျောင်းအုပ်ကြီး စတိုင်နဲ့ သူတယောက်)
ဘဝခရီး (ဗေဒင်၊ ယတြာ၊ အောက်လမ်း၊ အထက်လမ်း ပညာများကို 911 သို့ခေါ်စရာမလိုဘဲ အခကြေးငွေယူ ကာ အလားကား ဟောပေးနေသူတယောက်)
SSL connections have been built into email services on the Internet. This applies to webmail as well as to hosted email. Some webmail accounts offering such security measures free of charge are:
These webmail services allow you to enter your email account and communicate with it on an encrypted connection. Even though this data can still be captured by any filtering or surveillance mechanism, it will be next to impossible to make sense of it or decrypt it. Notice how the address is deliberately written with ‘https:’ in the beginning.
Essentially, this createsamuch more private method for reading and writing email. Used withagood password it will pave the way to securing your Internet communications. Registering one of these email accounts does not differ at all from registering with Yahoo or Hotmail. The reason is that the majority of webmail providers do not offer SSL connections to their clients.
Posted by Sai Sai at 1:53 PM0comments
သိပ်ပြီးနေမကောင်းချင် သလိုဖြစ်တာ နဲ့ မနေ့က ဆေးရုံသွားပြီး တကိုယ်လုံးကို စစ်လိုက်တယ်။ အဖြေထွက်လာတယ် သွေးထဲမှာ အဆီနဲ့ Glucose တွေများနေတယ်တဲ့ ဟာ ဒါဆိုရင် ဆီးချိုပေါ့။ ဆရာဝန်က ပြောတယ်.. ဟိုဟာမစားနဲ့..ဒီဟာကိုရှောင်ပါ. ဟိုဟာကို ဒီလိုစား လေ့ကျင့်ခန်းကို တရက်ကို ၂ နာရီ လောက်လုပ် ဆိုပြီး ညွန်ကြား ချက်တွေ ပေးသွားတာ စုံလို့။ ၂၀ ကျော်ဘဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းလို့ ရတယ်တဲ့. သောက်ဆေး တော့ မပေးလိုက်ဖူး။ နောက်သုံးလ ပြန်လာခဲ့ပါလို့ ချိန်းလိုက်တယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညစ်တာနဲ့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ် ဆိုပြီး မစားပါနဲ့ဆိုတဲ့ အစာတွေကို ထိုင်ထား ပစ်လိုက်တယ်။ မသောက်တာလည်း ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘီယာကို သောက်လိုက်တယ် ၆ လုံးကုန်သွားတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ.. တကယ် တကယ်ပါ ဘဲ..လေတယ်ဗျာ..လေတယ်..
Posted by Sai Sai at 10:21 PM0comments
မိုးအုံ့မှိုင်းမိှုင်း အင်္ဂါနေ့ မနက်ခင်းမှာ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် ငါ့အိပ်နေတုံး မန္တလေး ဗန်းမော်တိုက် လမ်းကြားထဲက အဆောင်ရှေ့မှာ မင်းရဲ့ ခေါ်သံကြောင့် လန့်နိုးခဲ့ရတာ ဒီနေ့ဆိုရင် ကိုးနှစ်ကြီးများတောင် ရှိခဲ့ပြီ ရောလား။ မင်းရဲ့ မင်္ဂလာပဲွကို လိုက်ခဲ့ဖို့ လာခေါ်တာ မင်းမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့တတွေ တနှစ်ကျော်နီးပါး အဆက်အသွယ် ပြက်ပြီး အဲဒီ မနက်ခင်းမှ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ဘဲ မင်းရဲ့ ခေါ်သံတွေဟာ ငါ့ကို အင်မတန့်မှ အံ့အားသင့် စေခဲ့တာ အမှန်ပါ။ အချိန်တွေကလည်း ကုန်လွန်မြန်ဆန်လွန်းပါဘိ။ ဪ..... ဒီနေ့ဆို မင်း အိမ်ထောင်ကျတာ9နှစ်တောင် ပြည့်သွားပြီ ရောလား။
မင်္ဂလာပဲြွပီးတော့ ငါတို့တတွေ ကိုယ့်နေရပ်ကို ကားတွေနဲ့ ညနေခင်းမှာ ဒို့တွေအတူ ပြန်ကြပြီး သြဂုတ်လ 27 ရက် အတွက် ဒို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မင်္ဂလာပဲွ ပြင်ဆင်ကြတာ ကိုလည်း မမေ့နိုင်ဘူးကွာ။ မင်းရဲ့ 27 ရက်နေ့ မင်္ဂလာပဲွမှာ ငါမြိုချခဲ့တဲ့ အရက်ဟာ အာခေါင်ကစပြီး အတွင်းထိအောင် ပူပြီးဆင်းသွားတယ်။ မင်္ဂလာပွဲပြီးတဲ့ ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ မင်းရယ်၊ ငါရယ် မူးပြီး မြို့ထဲ ကားပတ်မောင်းကာ အကြောင်းများ စုံလင်အောင် ပြောခဲ့ ကြတာကိုလည်း ငါအမှတ်ရ ပါတယ်။ ဒါတွေကို မင်း မှတ်မိကောင်း မှတ်မိပါလိမ့်မယ် ငါ့အတွက်တော့ မေ့နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ မင်း အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြိုးတွေထဲမှာ သံယောဇင် ဆိုတဲ့ ကြိုးက အင်မတန် ဖြတ်ရခက်တဲ့ ကြိုးတမျှင်ပါ။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ပေါင်းသင်း၍ ချမ်းသာသုခအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေလို့........၊ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း......မှသည်.......
Posted by Sai Sai at 7:41 AM0comments
CD Recovery toolbox သည် CD, DVD, HD DVB တွင် အစင်းကြောင်းများ (သို့) ပေါက်၍ ဖတ်မရ။ ပျက်စီးသွားသည့် File များကို 90 % နီးပါးလောက် recovery လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ freeware လေးတခုပါ။ သုံးရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ File size လည်း 662 KB သာရှိပါတယ်။ အဆင့်လေးဆင့် လုပ်ရုံနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Files တွေကို ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။4Gb ထက် ကျော်တဲ့ File အရွယ်အစား တွေကိုတောင် recovery လုပ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ နှစ်ချို့ CD တွေ ဖတ်မရတဲ့ အခါ CD recovery toolbox ဘဲကျနော့်ကို ကူညီပေးပါတယ်။
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows XP SP2, Windows 2003, Windows Vista တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Sai Sai at 10:23 AM0comments
ဟူးမ လွယ်ပါလား....အခုတလော ဘန်းထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေများ နေတယ်။ ဘန်းထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ကျနော် ဒီကနေ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ www.cgiproxylist.com/ မှာ ထောင်ပေါင်း များစွာသော porxy list တွေရှိပါတယ်။ Free လည်း အသုံးပြုလို့ ရတယ်လေ။ ဪ.....ဒီလောကကြီးမှာ privacy ဆိုတာ ဘယ်အချိန်ကြမှရှိမလဲ မသိတော့ဘူး။
Posted by Sai Sai at 3:16 PM 1 comments
Posted by Sai Sai at 11:06 PM0comments
ခင်လွန်းလို့ tag တယ်ဆိုတော့ အရေးကောင်းတဲ့ စိုင်းစိုင်း ကလည်း ရေးချင် လွန်းလို့ ရေးလိုက် ပါပြီ သန့်ဇော်မင်း။ စာရေးကောင်းလား မကောင်းလားတော့ မသိပါ မြန်မာစာ အမှတ်ဆိုလျှင် ၅၀ကျော်သည်ဟူ၍ မရှိခဲ့ဖူးပါ။ ဒါတောင် ကျနော်က ဆရာဦးတင်မိုး၏ တပည့် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဆရာကြီးတော် သလောက် ညံ့ဖျင်းတဲ့ ကျနော်ပါ။ စာစီစာကုံး ရေးတိုင်း သူငယ်ချင်းများ၏ လှောင်ပြောင်၊ သယော်မှု ဒဏ်ခံခဲ့ရပေါင်းလည်း မနည်း တော့ပေ။ လှောင်ပြောင်ကြပုံများ "ဟေ့ကောင် အိုက်ကြီးကျော့ (ငယ်နာမည်) မင်းစာစီစာကုံး ဖတ်ရတာ ကလည်းကွာ ရထားပေါ်မှာ အီးအီးပါ သလိုဘဲ..အဆက်အစပ်ကို မရှိဘူး" ခက်ပေဘူးလားဗျာ။ သူတို့ ပြောလည်း ပြောစရာ.. ရေးပုံက ဟုတ်မှမဟုတ်။ ဪ ဒီလောက်ဆို ကျနော့် အရေးအသားကောင်း မကောင်း ခန့်မှန်းနိုင်လောက်ပါပြီ။ ကျနော့်ပိုစ့်တွေလည်း မျက်လွှာဖြဲပြီး စိတ်ရှည်သီးခံစွာ ဖတ်ပေးကြသော ကျနော့် ဘော်ဘော်များကို ကျေးဇူးအထူး မတင်ဟူဆိုလျှင်..ကျနော်အား သူငယ်ချင်းဟု မသတ်မှတ် နဲ့တော့။
ကျနော် အကြိုက်ဆုံးပိုစ့် ၅ ခု (သူငယ်ချင်းများ ကြိုက်မကြိုက်မသိ)
၁။ ယူဆဂိကျေးဇူးမကင်း ခံစားချက်ဖြင့်ရေးခဲ့တဲ့ (အဟောင်းများ အသစ်ဖြစ်စေတဲ့ "မိုး")
၂။ ပေါသွပ်သွပ်အတွေး (Best of AntiVirus)
၃။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ (International Free SMS)
၄။ ကျနော့်အဲဒီလို config လုပ်ထားတဲ့ (Firefox အကြောင်း တစေ့တစောင်း)
၅။ အတိတ်ကအဖြစ် (Best beer effect )
တကယ်လို့ ကျနော့်ပိုစ့်များကို ကျနော့်လိုဘဲ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ Rate လေး လုပ်ခဲ့ပေးပါ။ မကြိုက်ဖူးဆိုလျှင် Cbox မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် Comment မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် တခွန်းလောက်တော့ ဟစ်ခဲ့လဲ့ပါ။
အလုပ်တွေ ရှုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ကြိုတင် အကြောင်းမကြားဘဲ.. tag လိုက်ပြီ
အဲဗားဘီးဇီးဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ညီ စိုင်းလင်းသူ
ဘဝဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တဲ့ ဘဝခရီး
စိတ်စေရာကို ရောက်တက်တဲ့ မေကိုကို
Posted by Sai Sai at 8:40 AM0comments
သတင်း ပုလင်းတွေ ဖတ်ရတာလည်း စိတ်မကောင်း လိုက်တာ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေက လည်း ကုံးကောက်စရာမရှိလောက်အောင် ဆင်းရဲလိုက်တာ၊ တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရတာ. တချို့ဆိုရင် အလုပ်သွားဖို့ ခရီးစားရိတ် မရှိလို့.. အပေါင်ဆိုင်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ မှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားတွေ ပေါင်နှံပြီး အလုပ်သွားတယ်. .အလုပ်ပြန်မှ ရလာတဲ့လုပ်အားခလေးနဲ့ ပေါင်နှံ ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား ပြန်ရွေးရ တယ်တဲ့၊ တချို့ဆိုရင် မနက်စာချက်ပြုတ်ပြီး အိုး၊ ခွက်၊ ပန်းကန်များကိုပါ ပေါင်နှံကြလေရဲ့။ ဪ...ဘဝ..ဘဝ...ချမ်းသာတဲ့ လူတွေများတော့.. စိန်တုံး စိန်ခဲ တွေကိုသီးလို့ပါ။ ကွာခြားလိုက်တဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေပါလား။
အခုလည်း ဆီစျေးတွေတက်ကုန်ပြီ..ဘတ်စ်ကား တွေလည်းရပ်ကုန်ပြီ။ မှတ်တိုင်မှာ လည်း လူတွေကို ကြိတ်ကြိတ်တိုးကုန်ပြီ။ ဘတ်စ်ကား တွေလည်း ဘယ်ပြေးနိုင်တော့မလဲ Gas စျေးတွေလည်း ၅ ဆလောက် တက်ကုန်တော့ ခက်လိုက်တာနော်.. အကုန်လုံးကို တက်နေ လိုက်တာဗျာ... တက်နေလိုက်တာ. ကျတာဆိုလို့... စိတ်ဓါတ်တွေဘဲရှိတော့တယ်။ ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်သွားတင်ရမလဲဗျာ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အပြစ်တင် ယုံသာ ကျန်တော့တယ်။ ဒီလိုအစစ အရာရာ တက်နေတဲ့..ကျနော်တို့ရဲ့ ခေတ်မီ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်တဲ့အမိ -ိုင်-ံေ-ာ် မှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်ရခြင်း ကြောင့်ပါ။ လူကြီးတွေပြောပြောနေတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးဆိုတာ ဒါဘဲဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။
ကျနော့်ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်ကိုသာ ရေးချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီပိုစ့်လေးရေးသားခြင်း ကြောင့် ကျနော်စိတ်ထဲတွင် ပေါ့သွားသည်။ အမှားများပါရင် ခွင့်လွတ်ပေးပါ။
Posted by Sai Sai at 5:12 PM0comments
ထမင်းစားပြီးတော့ အိပ်ငိုက်နေတာနဲ့ ဟိုတဝေထိုး ဒီတဝေထိုး နဲ့ Idea Generator website တခုကို သွားတွေ့တယ်.. သဘောကျလို့ သူ့ပိုင်ရှင်ဆီကို ခွင့်ပြုချက် မတောင်းဘဲ ကျနော့်ဘလောက်ထဲ အတင်းဆဲွထည့်ထားလိုက်တယ်။
Posted by Sai Sai at 3:05 PM0comments
ကျနော့် image တွေကို convert, rename, resize, crop, rotate, change color depth, add text and watermarks လုပ်ရင် Fast Stone Photo Resizer ကိုသုံး ပါတယ်။ သုံးရတာ လွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းတယ်။ File size ကလည်း သေးငယ်တဲ့ အပြင် ဒီ Software မှာ portable application ရှိတော့ memory sitck/ USB flash drive မှာလည်း ထည့်ထား လို့ရတယ်။ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် USB flash drive ကိုထိုးထည့်ပြီး အသုံးပြုလို့ ရတယ်။ ကျနော်တော့ ဒီ FastStone Photo Resizer ကို တော်တော့ကို နှစ်သက်မိလို့ ကျနော့် သူချင်းများကို မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
[Download Fast Stone Photo Resizer ]
[Download portable Fast Stone Photo Resizer ]
Posted by Sai Sai at 2:53 PM0comments
Find Out If Your Computer Is Secretly Connecting t...
Passenger plane crash in Thailand's Phuket on Sund...